သိန်းတစ်ထောင် ဆု ထပ်ပေါက်တယ်ဆို တဲ့ သတင်းတွေ ကို သိန်း တစ်သောင်းခွဲကံထူး ရှင် မိသားစု ပြန်ရှင်းပါပြီ – Shwewiki.com
သိန်းတစ်ထောင် ဆု ထပ်ပေါက်တယ်ဆို တဲ့ သတင်းတွေ ကို သိန်း တစ်သောင်းခွဲကံထူး ရှင် မိသားစု ပြန်ရှင်းပါပြီ
ဇန် နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ ၁၀၀၀ ကျပ်တန်အောင်ဘာလေထီရဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ပေါက်မဲဆုတွေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်…. အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ ကျပ် သိန်း တစ်သောင်းခွဲဆုကိုတော့ မြိတ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ကိုဂျပန်နဲ့ မအေးအေးမိုးတို့ မိသားစုက ရတနာသိန်းထိုက်အောင် ထီဆိုင်ကနေ ဆွတ်ခူးခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အသိပါ….
ဒီလို သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင်တွေဟာ နောက်ထပ် သိန်း တစ်ထောင်ဆုကိုလည်း သူတို့ပဲ ထပ်မံပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟုတ်မဟုတ်ကို ကာယကံရှင်တွေက မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ တခြားဘာဆုမှမပေါက်ဘဲ သတင်းမှားသာဖြစ်တယ်လို့ Duwun သတင်းဌာနက တင်ပြထားတဲ့ သတင်းအရ သိရပါတယ်…
သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ခဲ့တဲ့ ကာယကံရှင်ဖြစ်သူ မအေးအေးမိုးက ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကလွဲပြီး တခြားဘာဆုမှမပေါက်တဲ့အကြောင်း၊ အခုပေါက်တဲ့ ဆိုင်ကလွဲပြီး တခြားမှာလည်း ထီမထိုးဘူးဘဲ သတင်းအမှားတွေ မတင်ကြဖို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်…ဒါ့အပြင် သူတို့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ခဲ့တဲ့ ထီကိုယ်စားလှယ်ကြီးကိုလည်း သတင်းအမှန်ပြန်တင်ပေးဖို့ ပြောထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
ဒါကြောင့် သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ခဲ့သူ ကံထူးရှင်တွေဟာ နောက်ထပ် သိန်းတစ်ထောင်ဆုပေါက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲ သတင်းအမှားသာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပရိသတ်ကြီးတို့ သိရှိရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ဇနျ နဝါရီလ ၁ ရကျနမှေ့ာတော့ ၁၀၀၀ ကပျြတနျအောငျဘာလထေီရဲ့ ၁၁ ကွိမျမွောကျအဖွဈ ပေါကျမဲဆုတှေ ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ…. အမွငျ့ဆုံးဆုဖွဈတဲ့ ကပျြ သိနျး တဈသောငျးခှဲဆုကိုတော့ မွိတျမွို့မှာနထေိုငျတဲ့ ကိုဂပြနျနဲ့ မအေးအေးမိုးတို့ မိသားစုက ရတနာသိနျးထိုကျအောငျ ထီဆိုငျကနေ ဆှတျခူးခဲ့တာ ပရိသတျကွီးတို့လညျး အသိပါ….
ဒီလို သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုရှငျတှဟော နောကျထပျ သိနျး တဈထောငျဆုကိုလညျး သူတို့ပဲ ထပျမံပေါကျခဲ့တယျဆိုတဲ့ သတငျးဟာ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက ပွနျ့နှံ့ခဲ့ပါတယျဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဟုတျမဟုတျကို ကာယကံရှငျတှကေ မေးမွနျးခဲ့ရာမှာ တခွားဘာဆုမှမပေါကျဘဲ သတငျးမှားသာဖွဈတယျလို့ Duwun သတငျးဌာနက တငျပွထားတဲ့ သတငျးအရ သိရပါတယျ…
သိနျးတဈသောငျးခှဲပေါကျခဲ့တဲ့ ကာယကံရှငျဖွဈသူ မအေးအေးမိုးက ကပျြသိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကလှဲပွီး တခွားဘာဆုမှမပေါကျတဲ့အကွောငျး၊ အခုပေါကျတဲ့ ဆိုငျကလှဲပွီး တခွားမှာလညျး ထီမထိုးဘူးဘဲ သတငျးအမှားတှေ မတငျကွဖို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ…ဒါ့အပွငျ သူတို့ သိနျးတဈသောငျးခှဲပေါကျခဲ့တဲ့ ထီကိုယျစားလှယျကွီးကိုလညျး သတငျးအမှနျပွနျတငျပေးဖို့ ပွောထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ…
ဒါကွောငျ့ သိနျးတဈသောငျးခှဲပေါကျခဲ့သူ ကံထူးရှငျတှဟော နောကျထပျ သိနျးတဈထောငျဆုပေါကျတယျဆိုတာမဟုတျဘဲ သတငျးအမှားသာဖွဈတဲ့အကွောငျး ပရိသတျကွီးတို့ သိရှိရအောငျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော…
ငွေ ကြေးဥစ္စာတွေမဝင် ဘဲ လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်နေသူတွေအတွက် တကယ်စွမ်းတဲ့ လာဘ်ပွင့်ဂါထာတစ်ပုဒ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်
ဟိုက်ဂျက် ကားလေးဖြင့်် ခ ရီးဝေးသွား တတ်သော မိတ်ဆွေ များ အထူးသတိပြု ရန်